Puntland oo xirtay xarunta Amal Bank ee Garoowe
Posted on August 15, 2016RBC, Wararka
Garoowe (RBC Radio) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa xiray xilli hore oo maanta ah xarunta Amal Bank ee magaalada Garoowe,sida uu Raxanreeb u sheegay sarkaal shirkadda ka tirsan.
Waxaa la sheegay in xarunta Amal Bank lugu xiray amar ka soo baxay madaxtooyadda Puntland,markii la sheegay shirkadda inay ka dhaga adeegtey lacago lugu soo qoray oo lugu sheegay in lugu taageerrayo qorshaha ammaanka ee gobolka.
Sarkaal shirkadda ka tirsan,waxuu isna sheegay in ciidamada meesha qabsaday ay yihiin ilaalada gaarka ah ee madaxweyne ku-xigeenka Puntland,Cabdixakiim Xaaji Cumar (Camey).
Waxuu inta ku daray in xiritaanka xarunta Amal Bank ay la xiriirto lacag dowladdu ku amartay in ay bixiyaan Amal Bank,lakin ay shirkaddu ka cudur daaratay ujeedka loo rabo iyo habka lagu doonayo darteed , sidaasina lagula wareegay.
Dowladda wali war rasmi ah kama aysan soo saarin xiritaanka xarunta Amal Bank iyo waxa loo cuskadey.